Moisturizing Cream yeImbwa dzePaws uye Snout | Imbwa dzeNyika
Nat Cherry | 04/05/2022 08:45 | Imbwa zvishongedzo
Kunyangwe zvingaite sezvisina upenzi, moisturizing cream yembwa inonyanya kukosha kuchengetedza ganda remhuka yedu rakapfava., pasina kutsvuka kana kukwenya uye, chokwadi, hydrated. Kunyangwe zvichienderana nezvakawanda (zvakadai semamiriro ekunze kana kunyangwe imbwa yako yakavhiyiwa nguva pfupi yadarika) kusarudza kana zvichidikanwa kana kuti kwete, kushanya kune vet kwakakodzera kushanya kana tichida kuve nechokwadi chekuti imbwa yedu zvechokwadi. inoda.
Ndosaka nhasi isu hatisi kuzokukurudzira chete best moisturizer yembwa izvo zvauchawana paAmazon, asi isu tichataurawo nezve zvimwe zvinhu zvine chekuita nemusoro wenyaya iyi, semuenzaniso, chii chinonzi moisturizing cream, chii zviratidzo imbwa dzinoda kuti dzivepo, uye chii chatinofanira kuita kana isu tichifungidzira kuti ndizvo zvazviri. Uye zvakare, isu tinokurudzirawo iyi imwe yakabatana positi nezve nzira yekurapa mhino yakaoma.
PETUCHI Organic Balm ye...
Trixie Cream ye...
DISANE Nose Balm...
1 Iyo yakanakisa moisturizer yembwa
1.1 Pad kugadzirisa cream
1.2 Paw nemhino balm
1.3 Organic regenerating cream
1.4 Paw cream newakisi
1.5 mushonga wemhino
1.6 zuva nezuva moisturizer
1.7 Cream kuchengetedza mapedhi
2 Chii chinonzi moisturizer yembwa?
3 Chii chinonzi moisturizer ichi?
4 Ganda rakaoma rinopa sei?
4.1 Chii chekuita kana imbwa ine zviratidzo izvi?
5 Ndezvipi zvinhu zvechisikigo zvinofanira kunge zvine moisturizing cream yembwa?
5.2 Kokonati mafuta
6 kupi kunotenga moisturizer yembwa
Iyo yakanakisa moisturizer yembwa
Pad kugadzirisa cream
Kana imbwa yako yakatsemuka paw pads, rudzi urwu rwekirimu ruchaita zvakanaka kwazvo sezvainogadzirisa, inodyisa uye inonatsa padhi. Kunyanya kugadzirirwa chikamu ichi chemuviri, kamu cream ndeye organic zvachose, saka inongove neyakagadzirwa zvinhu zvakaita seavocado mafuta kana shea butter. Zvakanakira kudzivirira kukuvara pamazuva anotonhora zvakanyanya kana kupisa zvakanyanya pagore. Mukuwedzera, zviri nyore kwazvo kushandisa, iwe unongofanira kuisa zvishoma paruoko rwako, kugovera uye kumirira kuti ganda rigamuchire (iwe unogona kushandisa chitoyi kana kurapa kuvhiringidza imbwa yako kana zvichidiwa).
Paw nemhino balm
Yakagadzirwa newakisi chena nemhando dzakasiyana dzemafuta (muorivhi, kokonati, lavender, jojoba ...), mushonga uyu unonyaradza kusvotwa pamakumbo nepamhino. Inoshanda kune imbwa uye katsi, haina chepfu, saka hapana chinoitika kana ichinanzva, uye inokurudzirwa kuishandisa kaviri kana katatu pavhiki. Mukuwedzera, haisiyi mavara pasi.
Organic regenerating cream
Kana imbwa yako kana makumbo ekatsi kana mhino ikaoma, iyi cream inonyevenutsa uye inogadzira patsva inoshanda zvinoshamisa kuti hydrate kuitira kuti igare yakasununguka uye hydrated zvakare pasina nguva. Yakagadzirwa neyakagadzika zvigadzirwa, senge lavender, kokonati uye camellia mafuta, pamwe newakisi. Haisi muchetura, chinokanganisa chete ndechekuti ine mafuta uye inogona kusvibisa pasi.
Paw cream newakisi
Takatotaura kakawanda nezveGerman brand Trixie, nyanzvi mune zvigadzirwa zvezvipfuyo. Muchiitiko ichi, inopa 50 milliliters ye moisturizing cream ye paws pamutengo usingakundiki, sezvo inenge inenge 4 euros. Pasina mubvunzo, isarudzo yakanaka kana iwe usingashandisi yakawanda yekunyorovesa, mukuwedzera, inogadzirwa nenyuchi, haina chepfu uye iri nyore kushandisa. Icho chinhu chinobatsira zvikuru kudzivirira kuoma uye kupisa kubva pakupisa kana kutonhora.
Dulàc Nose Balm...
Iyi yese-yakasikwa cream inonyorovesa, inodzivirira uye inonyaradza mhino yemhuka yako. Haisi muchetura uye inogadzirwa kubva kuzvinhu zvakasikwa zvakadai semafuta ezuva, shea butter, wakisi, vhitamini E, uye mafuta omuorivhi. Haina zvinonhuwira kuitira kuti irege kushungurudza imbwa uye kushandiswa kwayo kuri nyore uye kunofadza. Inokurudzirwa kuishandisa kaviri kana katatu pazuva, kunyanya mumwedzi inotonhora.
zuva nezuva moisturizer
Iyo Healthy Dog Co...
Mugadziri anokurudzira kushandisa iyi cream, kune rumwe rutivi inodhura zvakanyanya kudarika avhareji, kamwe chete pazuva kuchengetedza paws uye mhino yemhuka yako ine hydrated uye yakapfava. Inogadzirwa nezvose-zvakasikwa zvinhu zvakadai semafuta emuorivhi, kokonati mafuta, vhitamini E mafuta, candelilla wax, mango uye shea butter, pamwe chete haina zvinonhuwira uye haina chepfu.
Cream kuchengetedza mapedhi
Belly Cream Pads...
Isu tinopedzisa neiyi imwe kirimu yakanyatso gadzirirwa kunyorovesa mapadhi embwa yako. Izvo zvakanaka kuti zvidzivirire kubva pakupisa, zvakare zviri nyore kwazvo kuisa uye hazvisiyi makumbo anonamatira. Mukuwedzera, zvigadzirwa zvayo zvakasikwa uye zvekirasi yekutanga: arnica, aloe vera, shea butter uye inotapira almond mafuta.
Chii chinonzi moisturizer yembwa?
Moisturizer yembwa yakangofanana neinonyorovesa yemunhu, kirimu yakagadzirirwa kunyorovesa ganda remhuka yako., chete kuti inogadzirwa nezvimwe zvinhu zvakakodzera kuti imbwa dzishandise zvakachengeteka sezvo, semuenzaniso, kana iwe ukaisa cream yemunhu pamhino yembwa yako, iye anozozvinanzva nekusaziva uye nekuzvimedza nekusaziva, nezvazvinoita kuti unzwe wakashata. .
Kune rumwe rutivi, sembwa dzajaira kufukidzwa nevhudzi, kirimu inowanzoshandiswa kunzvimbo dzakadai semhino kana paw pads, apo ganda rakaoma rinonyanya kuonekwa.
Chii chinonzi moisturizer ichi?
Moisturizer yakakosha sunungura imbwa yako pakunzwa kwegwenzi izvo zvinogona kutungamira kune ganda rakaoma semhedzisiro, semuenzaniso:
Munzvimbo munotonhora zvakanyanya kana kupisa zvakanyanya, tembiricha inogona kuita kuti imbwa ive neganda rakaoma kwazvo, iro rinobva ratsva uye, nekukwenya, rinokonzera maronda.
ari kurwara vanogonawo kuita kuti ganda riome uye rive.
Kune rumwe rutivi, kana ukageza zvakanyanya kana kushoma imbwa inogonawo kukura ganda rakaoma.
Saizvozvowo, kana ukashaya chinovaka muviri zvinogonawo kuguma nemamiriro ezvinhu aya.
Dzimwe nguva kana imbwa yakwesha rukato kana chimwe chirimwa chinogumbura, moisturizer inogona kubvisa kukwenya.
Pakupedzisira, kana imbwa yako ichangobva kuvhiyiwa mushonga unonyorovesa unogona kunyorovesa ronda uye kuita kuti risanyanya kunetsa.
Ganda rakaoma rinopa sei?
Kana iwe usina chokwadi kana imbwa yako ine ganda rakaoma kana kwete, tarisa nhevedzano yezviratidzo zvingave zvakakonzera dambudziko iri: chinonyanyozivikanwa ndechekuti chipfuyo chako chinogara chichikwenya. Chimwe chiziviso ndechekuti kana dandruff (iyo isiri chinhu kunze kwezvimedu zveganda rakaoma rakadeuka kubva paganda) rinoonekwa, kunyanya kana ukaiona pachiuno kana kumashure.
Chii chekuita kana imbwa ine zviratidzo izvi?
Zviri pachena, kana chimwe chezviratidzo izvi chikaonekwa, hazvifaniri kuregererwa, shure kwezvose, zvingasava kunyange ganda rakaoma, asi rimwe dambudziko, rakadai sehutachiona hwefungal. Chero zvazvingava, Chinhu chinonyanya kukosha ndechokuendesa imbwa kuna chiremba wemhuka kuitira kuti atiudze kuti mhinduro yakanakisisa ndeyei.. Dzimwe nguva inenge iri antibiotic cream, dzimwe nguva mimwe mishonga: yeuka kuti makirimu atinokurudzira, kunyange akananga kumhuka idzi, haasi mishonga, saka kuashandisa kunogona kupa zororo kwenguva pfupi (mushure mezvose, rudzi urwu rwekrimu runongobvisa chikamu. yezviratidzo) uye kuti imbwa yako inoda chimwe chinhu.
Ndezvipi zvinhu zvechisikigo zvinofanira kunge zvine moisturizing cream yembwa?
Kutanga, zviri nani kuve nechokwadi chekuti chigadzirwa chaunoda kutenga chakakodzera imbwa uye isiri chepfu. Zvadaro, verenga label kuti uone kuti ndeupi rudzi rwemoisturizer irimo. Pakati pezvakajairika (uye zvakanyanya zvakasikwa) iwe unowana:
Oiri ndiyo quintessential moisturizer, sezvo, pakati pezvimwe, ine omega-3, inochengetedza hydration yeganda. Kuti uite mhinduro yako yemusha, iwe unogona kuderedza mashupuni mashanu kusvika gumi emafuta mumvura yakanatswa uye woishandisa kamwe chete pazuva.
Sezvaunogona kufungidzira, oiri inzvimbo huru yekunyorovesa, uye kokonati oiri haina mutsauko. Muchokwadi, makirimu mazhinji ane chinhu ichi nekuti chinodzivirira fungal hutachiona uye haina chero mhedzisiro, ichiita kuti ive yakakwana kune imbwa dzinotambura neimwe mhando yekusawirirana.
Aloe vera zvakare chirimwa chinobatsira kwazvo, kuvanhu nemhukaNdicho chikonzero nei zvakajairika kuti zviwanikwe mumhando dzose dzemakirimu, angave ari moisturizers, mushure mekutarisana nezuva ... Aloe inobatsira kudzivirira kuchenesa uye kubvisa kutsva kwekunzwa kweganda pamwe nekuiisa mumvura.
Chekupedzisira, chimwe chinhu chinowanzo zivikanwa mumakirimu uye kunyange shampoos embwa ndeye oatmeal, sezvo inobatsira kudzivirira kuchenesa uye hydrates ganda. Kune rumwe rutivi, iwe unogona kuzora paste yakagadzirwa kumba paganda rembwa yako iwe pachako kana uchifanira kubuda mudambudziko, unongofanira kusanganisa oatmeal nemvura. Nekudaro, chenjera kuti urege kuidya, nekuti kunyangwe isiri chepfu, zviri nani kudzora zvese zvinodyiwa nemhuka yedu.
kupi kunotenga moisturizer yembwa
Semazuva ese mumhando iyi yezvigadzirwa chaizvo, Hazvisi zvakajairwa kuwana moisturizing cream yembwa kwese kupi, uye unofanirwa kuenda kune zvimwe zvitoro zvine hunyanzvi. Semuenzaniso:
En Amazon, hofori yemagetsi, uchawana marudzi ese e moisturizer kune zvese zvinonaka. Mukuwedzera, iwe unogona kutungamirirwa nemashoko emushandisi, ayo anogona kubatsira zvikuru kana uri kutsvaga chimwe chinhu chakanyatsojeka.
Kune rimwe divi, mukati mashopu anehunyanzvi zvakadai seKiwoko kana TiendaAnimal iwe uchawanawo rudzi urwu rwechigadzirwa, kunyange uchiyeuka kuti vanowanzova nemhando dzakasiyana-siyana pawebhu pane muzvitoro zvepanyama, izvo, zvisinei, zvinogona kukupa rubatsiro kana iwe wakavhiringidzika.
Pakupedzisira, kunyange zvazvo vasina zvachose veterinarians, nguva dzose, nguva dzose, usati washandisa chero kirimu zviri nani kuti ubvunze chiremba wako wemhuka, uyo achakuzivisa iwe kana zvichinyatsodiwa, kana dambudziko riri chimwe chinhu kana kwaunogona kuwana kirimu inonyatsoenderana nezvido zvako.
Iyo moisturizing cream yembwa ndeye, pasina kupokana, chimwe chinhu chinobatsira kupfuura chaungaite sekutanga kuona kana kana usati wambove nembwa. Tiudze, unoshandisa cream ipi kuti ganda rembwa yako rirambe rakanyorova? Iwe unokurudzira chero ipi zvayo yezvinyorwa? Munofunga kuti pane zvatasiya kutaura here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Moisturizing imbwa cream yemakumbo nemhino